ရသကဏ္ဍ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
နေ့အစွဲ – ကိုသက်အောင်
နေ့အစွဲ ___________________________ အဝေးကြီးက အသံတွေ လာနေတယ် အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မကြည့်နိုင်ဘူး ဖု ...
နေ့အစွဲ ___________________________ အဝေးကြီးက အသံတွေ လာနေတယ် အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မကြည့်နိုင်ဘူး ဖုန်းကို အသံတိုးထားရ သင့်ဆီမှာ ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ ပြတင်းဝနား မနက်ခင်းရဲ့ခြေသံ ကြားလိုက်မိသလို ။ ကိုသက် ...
၁၉၉၉ – မျိုးတေဇာမောင်
၁၉၉၉ ခင်ဗျား ဘာလို့ ညနက်မှ အိမ်ပြန်သလဲ မေးခွန်း မှာ အဖြေ မရှိဘူး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဖြေက ညနက်မှ အ ...
၁၉၉၉ ခင်ဗျား ဘာလို့ ညနက်မှ အိမ်ပြန်သလဲ မေးခွန်း မှာ အဖြေ မရှိဘူး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဖြေက ညနက်မှ အိမ်ပြန်ရတာ ကြိုက်လို့ ပဲဖြစ်နိုင်တယ် မြို့သေးသေးလေးဟာ ကျယ်ပြန့်လာပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် မြို့ရဲ့ ဧ ...
အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်း – လင်းသစ္စာဦး
အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်း တောင်တန်းတွေထဲ လေပြေလေးဟာ လေချွန်ပြီး ပြေးဝင်သွားတယ်. . . အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်တ ...
အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်း တောင်တန်းတွေထဲ လေပြေလေးဟာ လေချွန်ပြီး ပြေးဝင်သွားတယ်. . . အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်တိုင်း ခြေကားယား လက်ကားယား ငြင်းဆန်တတ်တဲ့ အမူအရာတွေနဲ့ဒီဒဏ်ကို လှိမ့်ခံနေရတာပါတဲ့ ကြာပြီ. . အ ...
က​လေး​​တွေက ဂိမ်း လူကြီး​တွေက ဘိန်း – မိုးဦးဆွေညိန်း
က​လေး​​တွေက ဂိမ်း လူကြီး​တွေက ဘိန်း တစ်​ ​နေရာယူက​နေ အစချီ ငါးဆိုတာနဲ့ ဒိုင်းကနဲပစ်​ချ စစ်​တိုက်​တမ်း ...
က​လေး​​တွေက ဂိမ်း လူကြီး​တွေက ဘိန်း တစ်​ ​နေရာယူက​နေ အစချီ ငါးဆိုတာနဲ့ ဒိုင်းကနဲပစ်​ချ စစ်​တိုက်​တမ်းကစားနည်းနဲ့ ငယ်​ဘဝ​​ပျော်​ရွှင်​ခြင်းမှာ က​လေးဂိမ်းဟာ လက်​နက်​ကိုင်​အနိုင်​ကျင့်​ခြင်း မပါ ​ ...
ငါ့အစား မင်းသာ အသက်ရှင်လိုက်ပါတော့ – ဖုန်းမောင်
ငါ့အစား မင်းသာ အသက်ရှင်လိုက်ပါတော့ ပြောရမယ်ဆို ငါက အလကားကောင်။ ငါ့ သွေးတွေ ဖောက်ထုတ်ပေးမယ် ငါ့ ကျေ ...
ငါ့အစား မင်းသာ အသက်ရှင်လိုက်ပါတော့ ပြောရမယ်ဆို ငါက အလကားကောင်။ ငါ့ သွေးတွေ ဖောက်ထုတ်ပေးမယ် ငါ့ ကျောက်ကပ်တွေ ဖြုတ်ပေးမယ် ငါ့ အသဲကို ဖဲ့ပေးမယ် မင်းသာ တကယ် အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ ဘာပဲ လုပ်ရ လုပ်ရ လ ...
အဖြစ်အပျက်ကို တောင်းပန်လို့မရဘူး – မင်းချောမြင့်
အဖြစ်အပျက်ကို တောင်းပန်လို့မရဘူး ဘယ်ဖြစ်ချင့်ပါ့ မလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ် မှီခို ရခြင်း မမှီခို လို့ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ် ...
အဖြစ်အပျက်ကို တောင်းပန်လို့မရဘူး ဘယ်ဖြစ်ချင့်ပါ့ မလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ် မှီခို ရခြင်း မမှီခို လို့ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ် လုံခြုံပါပြီတဲ့ မချိတင်ကဲ ပြုံးလိုက်တယ် ဘုရားသခင်ဟာ ဖွားဘက်တော်တွေနဲ့ ငမိုက်သားဟာ သူတော်စင် ရဲ့ ...
အရူးစကား – ကာတွန်းရွှေကိုဦး
အရူးစကား ကာတွန်းရွှေကိုဦး ...
သစ်ခွမိတ္တူ များ – မော်ဆူးသစ်
သစ်ခွမိတ္တူ များ ဆုံစည်းခွင့်ဟာ ဟိုးအမြင့်ကြီးမှာ တောင်စွယ် တောင်စွန်းက နှင်းနုနေခြည်ထဲ တို့ အချစ်ဟာ လေဖိအ ...
သစ်ခွမိတ္တူ များ ဆုံစည်းခွင့်ဟာ ဟိုးအမြင့်ကြီးမှာ တောင်စွယ် တောင်စွန်းက နှင်းနုနေခြည်ထဲ တို့ အချစ်ဟာ လေဖိအားနည်းလေတယ်။ ဒေသိယစကားသံဝဲဝဲ နှုတ်ဆတ်အပြုံးမှာ အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ အဖျားငွေ့ငွေ့ခြေလှမ်းများအတိုင် ...
မဆုံသောလမ်း – ဖုန်းမောင်
မဆုံသောလမ်း တွေ့ဆုံဖို့ လာခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာ။ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပျော ...
မဆုံသောလမ်း တွေ့ဆုံဖို့ လာခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာ။ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်း ချီးမွှမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်း စိတ်မှန်ပြင်ပေါ်မှာ မြင်ရတာ။ မကြာခဏ ဆုံတွေ့မ ...
မိသားစု(၂) – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
မိသားစု(၂) တစ်ယောက်က ဘယ်ဆို တစ်ယောက်က ညာ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ဝေမျှ သုံးစွဲလို့။ တစ်ဦးမေတ္တာဟာ တစ်ဦးမှာ စမ်းသီတ ...
မိသားစု(၂) တစ်ယောက်က ဘယ်ဆို တစ်ယောက်က ညာ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ဝေမျှ သုံးစွဲလို့။ တစ်ဦးမေတ္တာဟာ တစ်ဦးမှာ စမ်းသီတာပဲ။ တစ်ထမ်း တစ်ရွက်နဲ့ လောကဓံရှစ်ပါးပေါ် ညီညီလျှောက်။ သူ့အပူ ကိုယ့်အပူထား ကိုယ့်အေးချမ်းမှု သူ့ေ ...
မိသားစု(၁) – သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
မိသားစု(၁) တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ဖတ် အပြုံးဟာ ဖွင့်ဆိုစရာ မလိုတဲ့ ခက်ဆစ် အမေ့ရဲ့ ဥယျာဉ်မှာ ပန်းတွေ ဝေနေ ...
မိသားစု(၁) တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ဖတ် အပြုံးဟာ ဖွင့်ဆိုစရာ မလိုတဲ့ ခက်ဆစ် အမေ့ရဲ့ ဥယျာဉ်မှာ ပန်းတွေ ဝေနေတတ်သလို အဖေ့ရဲ့ လက်ထဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားကို တွေ့တယ်။ သုတလင်း(ဆင်ပေါင်ဝဲ) 2.1. ...
အမှား​တွေနဲ့​လောက – ရိုးသစ္စာ
အမှား​တွေနဲ့​လောက ​​ခေတ်​ကြီးကိုက အ​ရောင်ဝင်း​နေမှ အရာသွင်းချင်​​တာ လူ​တွေဟာ အမှန်​တရားကို ဖင်​ခုထိုင်ြ ...
အမှား​တွေနဲ့​လောက ​​ခေတ်​ကြီးကိုက အ​ရောင်ဝင်း​နေမှ အရာသွင်းချင်​​တာ လူ​တွေဟာ အမှန်​တရားကို ဖင်​ခုထိုင်ပြီး အမှန်​တရားကိုပဲ လိုက်​ရှာ​နေကြ အမှားကြီးက လူတကာနဲ့ လက်​ဆွဲနှုတ်​ဆက်​​ရင်း ​နေရာတကာမှာ အရာဝင ...
ဒီ အိပ်​မက်​​တွေထဲ … ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
ဒီ အိပ်​မက်​​တွေထဲ ... ​မျှော်​လင့်​ခြင်း​တွေ ​ ကွယ်​လွန်​သွားတာထက်​ ပိုဆိုးတဲ့ ​သေခြင်းတရား မနက်​ဖြန်​ ...
ဒီ အိပ်​မက်​​တွေထဲ ... ​မျှော်​လင့်​ခြင်း​တွေ ​ ကွယ်​လွန်​သွားတာထက်​ ပိုဆိုးတဲ့ ​သေခြင်းတရား မနက်​ဖြန်​ကို ရင်​မဆိုင်​ချင်​​တာထက်​ ပိုခက်​တဲ့ ​သေခြင်းတရား ရှိလား ​သေချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ​သေခြင ...
မင်းနဲ့ငါ ပျားရည်မြစ်ထဲ လက်ပစ်ကူးရအောင် – နေရိုင်း
မြစ်ဟာအားလုံးဆီကိုရွေ့လျားသွားကြပြီ မင့်အပြုံးတွေဟာကပ်ပါးပိုးတွေလိုပဲ ခဏတဖြုတ်အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့လျော့နေတယ ...
မြစ်ဟာအားလုံးဆီကိုရွေ့လျားသွားကြပြီ မင့်အပြုံးတွေဟာကပ်ပါးပိုးတွေလိုပဲ ခဏတဖြုတ်အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့လျော့နေတယ် အဆိပ်ခွက်ထဲကိုခရမ်းချဉ်သီးဆော့နဲ့ပေါင်မုန့်မီးကင်တစ်ချပ် ကမ္ဘာကြီးဟာမင်းမရှိရင်ကြယ်တွေခုန်နေလိ ...
ခွဲစိပ်ခြင်း မှတ်တမ်း – ဖုန်းမောင်
ကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ် ထုံဆေးထိုးတယ် ဆရာဝန်က ဓားတွေ တောင်းတယ် သေးငယ်ပြီး သွေး အရမ်းဆာလောင်နေတဲ့ ဓားကလေးတေ ...
ကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ် ထုံဆေးထိုးတယ် ဆရာဝန်က ဓားတွေ တောင်းတယ် သေးငယ်ပြီး သွေး အရမ်းဆာလောင်နေတဲ့ ဓားကလေးတွေ နောက်ကျောပေါ် တစ်ချောင်းပြီး တစ်ချောင်း စိုက်ဝင်နေတယ် အရေပြားကို လှန်တယ် အသားမှာ ကပ်နေတဲ့ အဆီက ...